वैशाख कृष्णऔँसी अर्थात माता तिर्थ औंसीको रुपमा परीचित आमाको मुख हेर्ने दिन - Radio Sagarmatha वैशाख कृष्णऔँसी अर्थात माता तिर्थ औंसीको रुपमा परीचित आमाको मुख हेर्ने दिन
वैशाख कृष्णऔँसी अर्थात माता तिर्थ औंसीको रुपमा परीचित आमाको मुख हेर्ने दिन
आज बुधबार वैशाख कृष्णऔँसी अर्थात माता तिर्थ औंसीको रुपमा परीचित आमाको मुख हेर्ने दिन । नौ महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्म दिने आमालाई सम्मान गर्न आजको दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिनका रुपमा मनाइँदैछ । जीवित आमालाई मीठो खान लाउन दिई सम्मान गरिन्छ भने दिवङ्गत आमाको सम्झनामा तर्पण, पिण्ड दान र श्राद्ध गरी सम्झना गरिन्छ । आजका दिन मातृश्राद्ध गरे अक्षय पुण्य प्राप्त भई आमाले तृप्ति पाउने धार्मिक विश्वास छ । यसै विषयमा रहेर सहकर्मी नवीन लुईटेलले संस्कृतिबिद डा विणा पौड्यालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
आजको दिन र आमाको महत्वलाई कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ ?
यो प्रकृतिबाटै आएको हो । मातृस्नेहको सम्बन्धबाटै संसार चलेको हुनाले यो दिनको विशेष महत्व छ ।
यो सँगै जोडिएको त्यस्तो कुनै किंवदन्ती वा घटना छ ?
हजुर, छन् । ठाउँ अनुसार यो छुट्टा छुट्टै छ । विश्वभरि मदर्श डे भनेर सन् १९०८ देखि मनाउन थालिएको हो । हामीकहाँ भने सनातन धर्म अनुसार शास्त्रमै उल्लेख गरेर प्राचीन समयदेखि नै मनाउने गरिउको छ । हाम्रो शास्त्रमा पृथ्वीको उत्पत्तिको कारक तत्वलाई मातृशक्तिसँग जोडेर त्यसको मूल्य मान्यता साथै धर्म, दर्शन तथा सामाजिक पक्षसँग पनि जोडेर आमाको कस्तो महत्व छ भनेर हेर्ने गरिन्छ । यसै अवसरमा काठमाडौंको थानकोटमा आजको दिन ठूलो माता तीर्थ मेला लाग्ने गर्दछ । आमा हुनेहरु त त्यती जाँदैनन् तर आमा नहुनेहरु धेरै जान्छन् । त्यहाँ गएर स्नान गर्ने, दान दक्षिणा दिने गर्छन् । यसको सन्दर्भमा एउटा किंवदन्ती यस्तो छ कि परापूर्व कालमा गाइ, भेडा चराउने गोठालाहरुले खाजा खाने क्रममा खसेको रोटीको टुक्रा आमा हुनेहरुको नहराउने र आमा नहुनेहरुको हराउने गरेको पाक्ष्एपछि के रैछ भन्दा त्यहाँ एउटा विशेष प्रकारको कुण्ड भएको र त्यो रोटी आमाले पाएको घटना बैशाख कृष्ण औंशी परेकोले त्यो ठाउँलाई विशेष मानेर पर्व मनाइन्छ ।
यो मनाउने तरिकामा कस्तो किसिमको परिवर्तन आएको छ ?
यो समय अनुसार हुन्छ । यो टोकन स्वरुप हो । हामीकहाँ १०८ वटा उपनिषदहरु छन् । त्यसमा पैथरी उपनिषद्मा आमालाइ मात देवो भवः भनेर आमाको महत्व दर्शाइ शिक्षा दिइएको छ । मानिस जुन सफलतामा पुग्छ त्यहाँसम्म पुग्न धेरै जनाको हात हुन्छ र त्यसको लागि सबैलाई मान्न पर्छ भन्ने प्रसंगमा आमाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, आमालाइ बिर्सन हुन्न भनेर सम्झाउने दिनका रुपमा यो मनाइने गरिएको हो । यसलाइ एक दिन मात्र नभएर ३ सय ६५ दिन नै मनाउन पर्छ । यसलाइ सबैले आ आफ्नै तरिकाबाट पनि मनाउने गर्दछन् ।
समाज परिवर्तनसँगै सन्तान हुँदाहुदै कति आमाबुबाहरु बृद्ध आश्रममा छन् र कति सन्तान विदेशमा भएकोले गाह्रो पर्दा सन्तानको साथ पाएका छैनन् यो प्रसंगलाइ कसरी जोड्नुहुन्छ ?
यो यस्तो छ, कति त राम्रो अवसरका लागि विदेश पलायन हुन्छन् भने कति देशमा रोजगारी नभएर पलायन हुन्छन् यो अवस्था अझ अबको केही वर्षमा विकराल हुन सक्छ । यसलाइ रोक्न सरकार वा संघसंस्थाले कुनै व्यस्थापन गर्न पर्छ ।